Iye zvino aripo mafoni evhidhiyo anosvika kuvanhu vasere paWhatsApp | IPhone nhau
Vhidhiyo yekufona inosvika kuvanhu vasere yave kuwanikwa paWhatsApp
Tiri kurarama muchikamu apo isu tinofanirwa kugara tiri kumba nekuda kwezvikonzero zvehutano hweveruzhinji. Munguva ino, nzanga yaifanirwa kutsvaga nzira yekutaurirana nevadikani kana kutsvaga maturusi ekutaurisa kubva kumba. Imhaka yeizvozvo mavhidhiyo mazhinji ekudana maapps akakura mumavhiki apfuura. Imwe yesarudzo idzi ndeye WhatsApp. Kusvika nhasi ndanga ndine muganho: huwandu hwevanhu vatinogona kuwedzera kune yega kufona. Nechirevo chitsva, mafoni uye mavhidhiyo mafoni anogona ikozvino kuitwa nevanhu vanosvika vasere panguva imwe chete.
Gadziridza WhatsApp kuti ugone kuita vhidhiyo yekufona nevanhu vanosvika vasere
WhatsApp ndiyo yakanyanya kushandiswa mameseji app munyika ine vanopfuura mamirioni 2000 vashandisi vanoshanda. Nekufamba kwenguva uye mushure mekutengwa neFacebook, matanho akabatanidzwa aenda munzira imwechete: shandura iyo app ive chishandiso chakawanda. States dzakatanga kuuya, ipapo manzwi kufona akauya, uye pakupedzisira vhidhiyo kufona kwakauya. Iyo chete muganho yaive huwandu hwevanhu vanogona kuverengerwa mune idzi mafoni: ina. Izvi zvinogona kuve nekuti WhatsApp chishandiso chine kushandiswa kukuru kuri kubva kunhare mbozha dzine zvikwangwani zvisina kunyanya kukura.
Nekudaro, nekuuya kwe COVID-19, vashandisi vakatsvaga mamwe mashandisirwo ayo akaganhurirwa anga asiri akaderera, kunyorera seZoom, Messenger Rooms (ichangoburwa), WebEx nevamwe. Izvi zvaita kuti WhatsApp idzokere shure uye maawa mashoma apfuura iyo mhando 2.20.50. Mune ino gadziriso isu inosanganisira mukana wekufona uye vhidhiyo kufona inosvika kuvanhu vasere panguva imwe chete, kubvisa kurambidzwa kwakatemwa kubva pakavhurwa chinhu ichi.
Tiri kuwedzera @Whatsapp vhidhiyo yeboka uye izwi kudana kubvumira kusvika kuvanhu vasere. pic.twitter.com/6efqB3rFyv
Iko kushandiswa kweiri basa hakushamisi zvakanyanya. Tine nzira mbiri dzekutanga kufona: kupinda muboka nekutsimbirira foni kana kamera kana kuenda ku "Kudana" menyu uye kutanga imwe nyowani. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti isu tinogona chete kungoita vhidhiyo mafoni pamwe nevanhu vanosvika vasere mukati avo zvishandiso zvine yazvino vhezheni yakaiswa. Parizvino, basa iri rakangosvika kuIOS kuitira kuti chete makuru mavhidhiyo mafoni anogona kuitwa ne iPhone ine WhatsApp vhezheni iri 2.20.50.
Pakupedzisira, ivo vakawedzerwa zvakanakisa mukukurumidza menyu mamenyu izvo zvinogona kukumbirwa uchishandisa Force Kubata. Tinogona kuona shanduko iyi kana tikatsikirira kwechinguva pane meseji mune chero hurukuro yedu. Kana isu tichidzvanya menyu nyowani inoonekwa, maererano nedhizaini yeIOS 13, nemabasa anosimbisa, kupindura, kumberi, kuteedzera uye kana tikadhinda "zvimwe" tinogona kuwana mamwe mabasa: pindura muchivande, wedzera kune vanofambidzana, tumira meseji ku bata uye bvisa meseji. Ichi chitsva kungogadzirwa chete, hapana mabasa matsva akawedzerwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Vhidhiyo yekufona inosvika kuvanhu vasere yave kuwanikwa paWhatsApp
Iyo Haptic Kubata haishande nezviziviso zveiyo nyowani iPhone SE
British NHS inoramba Apple-Google COVID-19 yekufambidzana API